पुनर्वास खबर | “जिन्दगी” महान हुनुपर्छ ! लामाे हुन आवस्यक छैन !
“जिन्दगी” महान हुनुपर्छ ! लामाे हुन आवस्यक छैन !
पुनर्वास खबर शुक्रबार १६, साउन २०७७ ०८:१८
तिमी भित्रकाे पुरुषार्थ जगाऔँ ! कसैले दमन गर्ला र कसैले विभेद गर्ला तर विचलित नबन ती शत्रु होइनन् ! होइनन् ! शत्रु । तिम्रो क्षमताको परीक्षा लिने वा तिमिलाई सार्थक जिन्दगी दिने भाग्यबिधाता सम्झ । म पनि मान्छे तिमी नि मान्छे विभेद किन ? भनेर गोहीको जस्तो आँसु नदेखाऊ ! तिम्रो आँसुको कुनै मूल्य हुने छैन । तिम्रो मूल्य त्यति बेला हुनेछ ‘जति तिमी थिचिँदै छौ त्यति नै मजबुत भएर उभिँदै छौ’ ।
“जसरी एउटा बिउ जति माटोमा पुरिन्छ त्यति नै मजबुत भएर उम्रिन्छ ।” सम्भावना बोकेकाहरू जति दबाब पर्छ तातिनै मजबुत हुन्छन् तर कायरहरू दबाब पर्नु भन्दा पहिला नै समाप्त भइसक्छन् ! तसर्थ अरूलाई दोष नदेऊ आफूलाई चिन । या तिमी आफूलाई यति मजबुत बनाऊ दमनकारीले पनि हात जोड्दै भनोस् “म हारे” । परिस्थिति सँग घुँडा टेकेर आफूलाई र आफ्नो अस्तित्वलाई पाउमा चढाएर हैन झनभन्दा झन् कठिन परिस्थिति सामना गरेर आफूलाई “म” सिद्ध गरेरै छोड्ने प्रण गराई ! यो निर्दयी दुनियाँ झुक्ने छ एक दिन ।
फुर्सदको समयमा कहिलेकाहीँ इतिहासको अध्ययन गराई ! जुन बेला यो सारा दुनियाँ पराइ भएको हुन्छ तर इतिहास आफ्नो भइदिने छ । जब हारेर जीवन समाप्तिको योजना बुनिँदै गर्दा इतिहासले जीवन बाँच्ने हौसला दिनेछ ! हामीले समय व्यर्थै खर्चेका हुन्छौं तर त्यहीँ समयलाई सदुपयोग गरेर “सिद्ध पुरुष” बन्न सक्छौ । जसले यो संसारमा आफ्नो नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखाएर गए ! तिनीहरूको धरातल तिम्रो भन्दा फरक थिएन ! सायद तिम्रो भन्दा दयनीय थियो । जस्तै पढ्न जाँदा पुस्तक सँगै घरबाट सुकुल समेत बोकेर जानू पर्थ्यो ।
यो मान्छेलाई स्कुलको कोठाभित्र छिर्ने अनुमति थिएन । किनकि उनी तथाकथित तल्लो जातको अरे । कुवामा पानी पिउन जाँदा ढुङ्गा बर्साइयाे ! समाजले घृणा गरे तिरस्कार गरे ! गर्न बाँकी केही नराखी गरे ! तर उनको पुरुषार्थलाई छुन सकेन ! हल्लाउन सकेन ! उनै अछुत, हेपिएको, थिचिएको र तिरस्कार गरिएको केटा स्वतन्त्र भारतको पहिलो कानुनमन्त्रि भए । जसको नाम डा. भीमराव अम्बेडकर हो । हिजो जसले तिरस्कार गर्थे आज समयले उनीहरूलाई ढोग्नु पर्ने ठाउँमा उभ्यायो ।
के हामी सँग पीडा दिनेलाई र घृणा तिरस्कार गर्नेलाई “धन्यवाद” दिने हिम्मत छ ? छैन ! किनकि हामी मान्छे भएर पनि मान्छे हुन सकेका छैनौँ । यी महान् व्यक्तिबाट हामीले लिनुपर्ने प्रेरणा “अरूले थिच्नु भनेको समाप्त हुनु होइन ! म भित्रेका शक्तिलाई निकाल्ने वातावरण बन्नु हो ! त्यसकारण अरूलाई गाली गर्नु पर्दैन ! आफूलाई उठाए पुग्छ ।” जय स्वाभिमान
- लेखक महता ( ICB Project अन्तरगत पी.आर.एल् कुमार कम्पनीका, ल्याब म्यानेजर तथा एक बौद्धिक युवा तथा विभेद विरुद्धका अभियन्ता पनि हुन।)